देशको बेइज्जत: यसरी भइरहेको छ खेलाडीका नाममा मानव तस्करी | Citizen Post News
देशको बेइज्जत: यसरी भइरहेको छ खेलाडीका नाममा मानव तस्करी
२०७४ पुस २४ गते ११:४१
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीका नाममा गैरखेलाडीहरूको मानव तस्करी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय त्यस्तो घटनाक्रममा केही कमी आएता पनि पुनः यस्तै घटनाको उजागर भएको छ । खेलाडीका नाममा गैरखेलाडी विदेशमा लगेर मानव तस्करी गर्दै लाखौँ रूपैयाँ असुल्ने गिरोह नै सक्रिय छ । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलहरूमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने नक्कली खेलाडीहरूका कारण दिनानुदिन देशको बदनाम भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाली खेलकुद क्षेत्र विदेशमा मानव तस्कर गर्ने साधन बन्दै गएपछि क्षमतावान् वास्तविक खेलाडीहरुले भने अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको छ । पैसा असुलेर नक्कली प्रमाणपत्र तथा कागजपत्र तयार पारी खेलाडीको नाममा मानब तस्करी भइरहंदा पनि सम्वन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
खेलको 'ख' पनि ज्ञान नभएका त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलाडी, प्रशिक्षक, टिम म्यानेजर बनाएर विश्वकपमा सहभागी बनाएपछि विश्वसामु नेपालको इज्जत कता पुग्यो होला ? यस्तै घटना भयो-२०१६ डिसेम्बरमा इन्डोनेशियाको बालीमा आयोजित पेंककसिलात मार्शल आर्ट विश्व च्याम्पियनशीपमा । यो खेलमा नेपालका तर्फबाट खेलाडीका रूपमा रुकुमका सुरेन्द्र विष्ट, प्रशिक्षकका रूपमा कपिलवस्तुका महेश सिंह र टिम म्यानेजरका रूपमा जाजरकोटका ललितकुमार बानियां सहभागी भए । उनीहरूसँग आवश्यक सबै कागज थिए तर सबै नक्कली । टिमका सबै सदस्यलाई पेंककशिलात भन्ने कस्तो खेल हो, कसरी खेलिन्छ केही थाहा नै थिएन । कारण उनीहरू खेलाडी नभई खेलाडीको नाममा इन्डोनेशिया, ब्राजिल हुँदै अमेरिका जान लागेका नेपालीहरू थिए । र, उनीहरूसँग ६० लाख रूपैयाँ लिएर खेलाडी बनाएका थिए-पेंककशिलात मार्सल आर्ट नेपालका अध्यक्ष टिकाराम मोटे बसाई ठकुरीले ।
उद्घाटन खेल नै नेपाल भर्सेस उज्बेगिस्तानबीच थियो । त्यसको लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका सुरेन्द्र विष्टको नाममा मञ्चबाट बारम्बार घोषणा भयो । तर खेलाडीका रूपमा सहभागी भएका विष्टलाई रिङ उक्लिने साहस आएन । यदि उनी रिङमा उक्लिएको भए उज्बेगिस्तानका राष्ट्रिय खेलाडी ओतावेक नशीमजोनोवको एकै प्रहारमा रिङ आउट हुने निश्चित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती पाएका खेलाडीसँग नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी बनेर रिङमा उत्रिँदा र एकै प्रहारमा नकआउट हुंदा देशको इज्जत कहाँ जाला ? यहि सोचेर विष्टले आफ्नो पटक–पटक उद्घोष हुँदा पनि नसुनेझैँ गरे । उद्घाटनमा सबै खेलाडीसँगै उनीहरूले पनि नेपाल झण्डा बोकेरै मार्च पास गरे । उनीहरूसँग २ जना वास्तविक खेलाडी पनि थिए । तर नक्कली प्रशिक्षक र म्यानेजरका कारण सक्कली खेलाडीले खेल्न पाएनन् । यसरी राष्ट्रको बेइज्जत भयो-मात्र एक मानव तस्करी गर्ने मानिसको कारण ।
देशको वेइज्जती अझ थपियो जब च्याम्पियनशिप सकिए पनि उनीहरूलाई टिकाराम मोटे बसाई ठकुरीले आयोजकले दिएको होटलमा ४ महिनासम्म राखेर पैसा नतिरी भागे । खास उनीहरूको टिमलाई टिकाराम मोटे बसाई ठकुरीले खेलाडी बनाएर थाइल्याण्ड, इन्डोनेशिया, ब्राजिल हुँदै अमेरिका पुर्याउने भन्दै जनही १५ लाख रूपैयाँ लिएका थिए । जसमध्ये ३ जनालाई इन्डोनेशिया खेलमा पुर्याए पनि २ जना भने थाइल्याण्डबाटै फर्किएका थिए । अहिले टिकाराम मोटे बसाई ठकुरी कम्बोडियामा छन् । आफुहरूलाई नक्कली खेलाडी बनाएर लाखौँ ठग्नुको साथै देशकै इज्जतमाथि दाग लगाउने विरुद्व सञ्चारमाध्यममा जान्छु भन्दा ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेका छन् । अहिले पनि टिकारामले कम्बोडियाबाटै खेलाडी बनाएर मानव तस्करी गरिरहेको पीडितहरूको दाबी छ । यतिखेर पनि टिकाराम मोटे बसाई ठकुरी सयौँ नेपालीहरूलाई अमेरिका, बेलायत लैजान्छु भन्दै ठगिरहेका छन् ।